Kooxda Chelsea oo ogolaatay qiimaha ay Leicester City ku doonayso in looga iibsado Ben Chilwell… (Goorma ayaa heshiis lagu dhawaaqayaa?) – Gool FM
Kooxda Chelsea oo ogolaatay qiimaha ay Leicester City ku doonayso in looga iibsado Ben Chilwell… (Goorma ayaa heshiis lagu dhawaaqayaa?)
(London) 25 Agoosto 2020. Sida wararku ay sheegayaan heshiiska ay kooxda Chelsea kula soo wareegso daafaca garabka bidix ee Ben Chilwell ayaa gabo-gabo ku dhow, iyadoo Blues ay ogolaatay qiimaha 50-ka milyan ee gini oo ay Leicester City ku doonayso in looga iibsado daafacan.
Kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ayaa horay ula soo wareegtay Hakim Ziyech iyo Timo Werner, waxaana Blues ay haatan indhaha ku haysaa inay safkeeda ku soo darto Ben Chilwell iyo Weeraryahanka kooxda Bayer Leverkusen ee Kai Havertz.
Kaddib toddobaadyo wadahadallo l ala yeeshay Leicester, Jariiradda The Telegraph ayaa sheegaysa in Kooxda Chelsea ay heshiis kala gaartay saxiixa Chilwell dhiggooda Premier League.
23-sano jirkaan, kaasoo hadda laga daweynayo dhaawac ciribta ah oo laga yaabo inuu ku seego bilowga 2020-21 ayaa la filayaa inuu si rasmi ah ugu biiro Blues saddexda maalmood ee soo socota.
Xiddiga xulka qaranka England ee Chilwell ayaa la sheegay inay kooxda Chelsea u gacan gelinayso heshiis cusub oo shan sanadood ah.
Dhinaca kale warbixin gaar ah ayaa soo jeedinaysa in saxiixa xiddiga 90-ka milyan ee gini ku fadhiya ee Havertz laga yaabo in sidoo kale la soo gabagabeeyo maalmaha soo socda oo uu ka mid noqdo Chelsea.
Tababare Antonio Conte oo maanta ka tagi kara shaqada Inter Milan, xilli uu kulan fool ka fool ah la leeyahay Madaxweynaha Kooxda
Maxaa ka soo baxay kulankii Nuska Saac qaatay ee ay wada yeesheen Macallin Ronald Koeman iyo Sergio Busquets?